November 2019 - Myitter
November 26, 2019 Myitter 0
လတ်တလော ပရိသတ်တွေ ပူဆွေးနေကြတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ရဲ့နာရေးသတင်းကတော့ အနုပညာရှင်တွေကြားထဲမှာပါ တော်တော်လေး စိတ်ထိခိုက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ စိတ်ထားကောင်းပြီး ပရိသတ်အပေါ် တာဝန်ကျေလွန်းတဲ့ ကစ်ကစ်ရဲ့နာရေးကိုတော့ ကူညီမယ့်သူတွေလည်း အများကြီး ထွက်ပေါ်လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ ဇနီးမောင်နှံကလည်း ခင်မင်ရတဲ့ အနုပညာရှင် ကစ်ကစ်အတွက် ဈာပနအလှူငွေတွေ ချက်ချင်းဆိုသလို […]
ဂိမ်းဆော့ရင်း ဆဲတတ်တဲ့သူတွေဟာ တကယ်တော့စိတ်ရင်းကောင်းသူတွေသာဖြစ် …
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဂိမ်းအတူတူဆော့ရင်း ဆဲတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အဖွဲ့ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်!…တကယ်တော့ သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ဟာရှင်းပြီး သဘောကောင်းလွန်းပါတယ်တဲ့။ ဂိမ်းဆော့ရင်း အရှိန်ပါသွားတဲ့အခါ မျောသွားတော့ ပါးစပ်က တောင်ပြောမြောက်ပြောတွေထွက်လာတာပါ..xD တကယ်တော့ ထိခိုက်ပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ အကြောင်းမသိတဲ့လူတွေ သူတို့ဂိမ်းဆော့ရင်းထဆဲနေတာကို ကြားရင် လန့်ဖျပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းရှုံးလို့ ဘူပြီး blame တာနဲ့ ဆဲတာကမတူဘူးနော်။ ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ […]
ပြည်သူတွေ သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုကြတဲ့ တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ အိမ်ပြန်ခရီး ပုံရိပ်များ …..
Myanmar Idol Season4ရဲ့ Country Music Week မှာ တန်ခွန်ကျော်ဟာ အေးမြဖြူ..အက်စတာတို့နဲ့ အတူ ထိုင်ခုံ ၃ လုံးမှာ ထိုင်ခဲ့ရပြီး Vote အနည်းဆုံးသာ ရရှိခဲ့တာမို့ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်…. တန်ခွန်ကျော်ဟာ Myanmar Idol က […]
ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားချင်လို့ ပန်းရောင်းရင်း ပိုက်ဆံစုနေတဲ့ အဖွားကိုကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီး
ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားချင်လို့ ပန်းရောင်းရင်း ပိုက်ဆံစုနေတဲ့ အဖွားကိုကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီး 26.11.2019 မှာ ကိုမွန်မြတ် မှပုဂံ ဘုရားဖူးချင်တဲ့ အဖွားကို စားရိတ်ငြိမ်း အခမဲ့ ဘုရားဖူးလိုက်ပို့ရင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုက တွေ့ခွင့် ကုသိုလ်ယူခွင့်ရခဲ့တာပါ။ အဖွားဟာ မုံရွာမြို့ ဒေါနခြံမှာ တစ်ယောက်ထဲနေတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ ပုဂံဘုရားဖူးချင်လွန်းလို့ မနက် (၁) နာရီကနေထပြီး […]
မိမိ တဦးတယောက်တည်းအားဖြင့် NLD အစိုးရကိုဖြုတ်ချနိုင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ House Of Orchid ပိုင်ရှင် ဦးဌေးအောင်….
NLD အစိုးရလုပ်လို့ ဘ၀ပျက်ခဲ့ရပြီဟု ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းရှိ House of Orchid ပိုင်ရှင် ဦးဌေးအောင်က နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် မဟာမိတ်ပါတီ ၂၀ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။ ထို့ပြင် House of Orchid သည် သီးခြားလွတ်လပ်သောနယ်မြေဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိ […]
ထီး​ဆောင်း မျက်စိ အခမဲ့အထူးကုဆေးရုံအား ဆက်သွယ်လိုလျှင် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပတ်များ ….
ထီး​ဆောင်း .. တစ်သက်​လုံး မမြင်​ရ​တော့ဘူးလို့ထင်​ခဲ့တဲ့ မျက်လုံးတစ်​စုံ ထီး​ဆောင်း​ကျေးဇူးေ​ကြာင့်​ ပြန်​မြင်​ရပြီသမီးရယ်​လို့ သူငယ်​ချင်းအ​ဖေ​ပြောခဲ့ဖူးလို့ ကြားဖူးတာကြာခဲ့​ပေမဲ့ မ​ရောက်​ဖူးသလို ဘယ်​နားရှိမှန်းကိုမသိခဲ့ပါဘူး။ စစ်​ကိုင်းက​နေ မုံရွာ သွားရင် မြင်းမူ မရောက်ခင် ၃ မိုင် အလို မှာ “ထီးဆောင်း”ဆိုတဲ့ ရွာ​လေး ရှိပါတယ်။ အခမဲ့ မျက်စိကုသပေးတဲ့ […]